PineTab: mashandisiro ekushandisa mamwe masisitimu anoshanda seMobian | Linux Vakapindwa muropa
Vamwe venyu pamwe vari kuneta nekuverenga nezve iyo pinetab, asi ini ndinofunga kuvhurwa kwayo kwakakosha nhau uye nhau dzakakosha dzinofanirwa kutaurwa. Maawa mashoma apfuura tinotaura newe yematambudziko ekutanga anozivikanwa nehurongwa hwekushandisa iyo inounza nekutadza, uye ikozvino isu tichaenda kutaura nezve yekutanga mamwe masystem anoshanda anotsigira zviri pamutemo iyo itsva PINE64 piritsi, iyo yakatemerwa Yekutanga Adopter uye iyo ichiri mukusimudzira .
Kwemazuva mashoma, Mobian, iyo nharembozha yeDebian, inowanikwa muhusiku vhezheni. Kubva nhasi Gunyana 10, Arch Linux inowanikwawo, kunyangwe yega yega system iine "madiki madudu". Izvo zvavanobvumirana nazvo ndezvekuti mune ese ari maviri maPurism's Phosh interface, yakavakirwa paGNOME, yakasarudzwa. Pane nzira dzakasiyana dzekuisa iyo mifananidzo, asi pachezvangu ini ndaikurudzira imwe, iwo murairo "dd" watinopa mushure mekucheka.
1 Mobian uye Arch Linux vanosvika paPineTab
2 Zvinogoneka, asi ngoro
Mobian uye Arch Linux vanosvika paPineTab
Ini pachangu, ndakaedza Etcher, Raspberry Pi Imager, uye iyo raira "dd". Iyo yakandishandira zvakanakisa, muchokwadi chete, anga ari iwo murairo "dd" unotaurwa naMobian muWiki yake. Saka kuisa imwe inoshanda sisitimu pane PineTab, isu tinofanirwa kuita zvinotevera:
Isu tine mufananidzo weanoshanda system. Sezvatataura, panguva yekunyora uku chete Mobian neArch Linux vanoshanda zviri pamutemo. Mobian inogona kutorwa kubva Iyi link, uye Arch Linux kubva uyu mumwe.
Kana iyo faira ikamanikidzwa, isu tinopwanya mufananidzo.
Tevere, isu tinoisa iyo SD kadhi mune iyo kadhi kuverenga kwecomputer yedu (kunyange ichigona zvakare kuitwa kubva kuPineTab).
Isu tinovhura terminal uye tinonyora unotevera kuraira (kushandura "NAME-OF-THE-IMAGE" nemazita uye nzira yemufananidzo uye "X" nenhamba yekadhi redu reS SD):
Tinomirira kuti chirongwa ichi chipedze.
Isu tinoisa iyo SD kadhi muPineTab (iwe unofanirwa kuvhura mukamuri kuruboshwe) uye woitangazve. Ichabhuroka kubva pakadhi uye yotanga maitiro ekusetesa
Zvinogoneka, asi ngoro
Sezvo iyo Mobian Wiki, nguva yekutanga zvinotora nguva yakati rebei kutanga nekuti inowedzera kukura kwechikamu, asi ichi chinhu chinongoitika kamwe chete. Isu tinofanirwa kuziva kuti isu tiri kutarisana nehurongwa hwekushanda muchikamu chekutanga, saka isu tichawana kukundikana kwakawanda, asi izvi zvinotibatsira kuti tione kuti PineTab yedu inogona kumhanya akasiyana masisitimu anoshanda uye kuti sarudzo yekuzviita kubva kukadhi inoshanda.
Iwo ekumberi ma link anotiudzawo kuti default pini iri 1234 yeMobian uye 123456 yeArch Linux. Munguva pfupi, kana zvakadaro ndinovimba, Neon Mobile ichavhurawo mufananidzo wayo yePineTab, uye zvakafanana zvinogona kutaurwa kune mamwe masisitimu akadai sePostmarketOS. Takatarisana neprojekti iri kutora nhanho dzekutanga, asi ini ndinofunga zvakakosha kune vashandisi vanofarira kukanganisa. Uri mumwe wedu here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mobian uye Arch Linux ARM: Maitiro ekuisa ekutanga mamwe masisitimu anogona kushandiswa paPineTab nenzira YEMAHARA
OpenRGB: vhezheni nyowani yemazhinji-mutengesi RGB yekudzora app